Ungabhalisa kanjani kwaWallapop | Izindaba zamagajethi
Ungayibhalisela kanjani iWallapop
Kulezi zikhathi, uma kukhona okuthile okwandayo kunokuba kube yingozi, yizinhlelo ezisisiza ukuthi sithengise futhi sithenge imikhiqizo eseyenziwe. Namuhla sizokuqondisa ekusetshenzisweni kwewebhusayithi yeWallapop kanye nezinhlelo zayo ze-iOS noma i-Andorid.
Isici sale sevisi ukuthi ngeke ukwazi ukubhalisa uma ungenayo ifoni ephathekayo, okungukuthi, kufanele ulande uhlelo lokusebenza lwe-iOS noma i-Android, qedela inqubo yokubhalisa bese uqala ukusebenzisa ipulatifomu.
Ake siqale ngokuchaza kancane ukuthi i-wallapop.com isebenza kanjani, okuyi-portal ye-inthanethi lapho yonke inqubo yenzeka khona. Lapho nje ungena kuwebhu uzokwazi ukubuka imikhiqizo ngendlela yamakhadi lapho ukhonjiswa khona isithombe somkhiqizo, intengo incazelo encane nomsebenzisi oyithengisayo.
Uma unesifiso kunoma imuphi umkhiqizo, chofoza ekhadini bese uqondiswa ekhasini elisha lapho unikezwa khona eminye imininingwane futhi waziswa ukuthi uma ufuna ukuthenga umkhiqizo kufanele ulande uhlelo lweWallapop kudivayisi yakho yeselula.
Manje siyaqhubeka nokukukhombisa amacala okufanele uwalandele ukuze ubhalise kuhlelo lokusebenza lweselula. Sikukhombisa inqubo kuhlelo lokusebenza lwe-iOS, sikwazisa ukuthi inqubo yokubhalisa iyafana kuzo zombili i-iOS ne-Android.
Lapho usulanda uhlelo lwe-iOS bese ulifaka, uzobona ukuthi izikhangiso zomkhiqizo nazo ziyakhonjiswa. Okufanele ukwenze ukubhalisa yilokhu:
Chofoza ekhoneni eliphezulu kwesobunxele kusithonjana ngemigqa emithathu ngemuva kwalokho uzobona ukuthi isikrini sihamba ngakwesokudla bese Ukhonjiswa imenyu empunga lapho into yokuqala eyiRejista.
Chofoza ku- Bhalisa futhi unikezwa inketho yokukwenza nge-akhawunti yakho ye-Facebook noma nge-akhawunti ye-Gmail. Ngaphezu kwalokho, Ungabhalisa ngendlela yendabuko kokubili igama nesibongo sakho, i-imeyili nephasiwedi.
Njengoba ukwazi ukubona, inqubo ilula kakhulu, yize ihluke kakhulu kwamanye amapulatifomu lapho inguqulo yewebhu nenguqulo yamadivayisi eselula kungenza ukuthengwa komkhiqizo othile. Kulokhu, kunguqulo yewebhu awukwazi ukulayisha imikhiqizo kuwebhu, okumele uyiphathe kusuka kuhlelo lokusebenza leselula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayibhalisela kanjani iWallapop
IWallapop Web ayisebenzi. Ingxenye yengxoxo ayisebenzi, ivinjiwe ukulayisha imiyalezo.
Ngakho-ke noma usebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula noma awukwazi ukusebenzisa iWallapop.
Ungasilanda kanjani Windows 10 isiphequluli seSpartan